Tait Fletcher – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Jonah Hex (2010) Unicode Jonah Hex ဆိုတာကေတာ့ DC Comics Book ထဲကဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ် Action Fantasy ဇာတ်ကားမျိုးဖြစ်ပြီး ကောင်းဘွိုင်ဆန်ဆန်ရိုက်ကူးထားတာပါ. Megan Fox ရဲ့ညှို့အားပြင်းပြင်း သရုပ်ဆောင်ချက်တွေက ဒီဇာတ္ကားကို လူကြိုက်များစေခဲ့ပါတယ်..ဇာတ်လမ်းက သိပ်ထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ဘဲ သာမန် Action မျိုးပဲဖြစ်ပေမယ့် Megan Fox ပရိတ်သတ်အတွက်တော့ ကျေနပ်အားရမိမယ့် ဇာတ်ကားမျိုးပါ..။ Credit Review Zawgyi Jonah Hex ဆိုတာေကတာ့ DC Comics Book ထဲကဇာတ္ေကာင္ျဖစ္ပါတယ္ Action Fantasy ဇာတ္ကားမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေကာင္းဘြိဳင္ဆန္ဆန္႐ိုက္ကူးထားတာပါ. Megan Fox ရဲ႕ညႇိဳ႕အားျပင္းျပင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက ဒီဇာတၠားကို လူႀကိဳက္မ်ားေစခဲ့ပါတယ္..ဇာတ္လမ္းက သိပ္ထူးထူးျခားျခားမဟုတ္ဘဲ သာမန္ Action မ်ိဳးပဲျဖစ္ေပမယ့္ Megan Fox ပရိတ္သတ္အတြက္ေတာ့ ေက်နပ္အားရမိမယ့္ ဇာတ္ကားမ်ိဳးပါ..။ Credit Review
IMDB: 4.7/10 55276 votes
Project Power (2020) Unicode August 14 ရက်နေ့က Netflix ကနေပြသသွားတဲ့ Action, Crime, Sci-Fi ကားကောင်းလေးကို တင်ပေးချင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်း အကျဥ်းလေးကိုပြောပြရရင်တော့ . . .နယူးအော်လင်းမြို့ရဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ ဆေး အသစ်အဆန်းတစ်မျိုးရဲ့ သတင်းက ပျံ့နှံနေပါတယ်။ထိုဆေးက မူးယစ်စေတဲ့ ဆေးမဟုတ်ဘဲ သောက်လိုက်တဲ့လူကို ၅ မိနစ်ခန့် စူပါစွမ်းအားပေးတဲ့ဆေးပါ။ကိုယ်က ဘာအစွမ်းရမယ်ဆိုတာကိုတော့ သောက်ပြီးမှပဲ သိရမှာပါ။ တစ်ချို့က ကိုယ်ပျောက်နိုင်တယ်။တစ်ချို့က သေနတ်ပြီး တယ်။ အဲဒီလိုကွဲပြားတဲ့ အစွမ်းတွေပေးတဲ့ဆေးကို အသုံးချပြီး လူတွေက ပစ်မှုတွေကျူးလွန်လာတဲ့အခါမှာတော့ ရဲတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ။ ဒီဆေးတောင့်တွေ ဘယ်ကရောက်လာတာလဲ။ ဒီဆေးကိုဖန်တီးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ ဆိုတာကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Van ဖြစ်ပါတယ် Zawgyi August 14 ရက္ေန႔က Netflix ကေနျပသသြားတဲ့ Action, Crime, Sci-Fi ကားေကာင္းေလးကို တင္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ဇာတ္လမ္း အက်ဥ္းေလးကိုေျပာျပရရင္ေတာ့ . . ...
IMDB: 6.0/10 23441 votes